Harder & Steenbeck waxay dhowaan maalgashi xoog leh ku sameysay xaruntooda wax soo saarka ee Norderstedt, Germany. Saddex mashiinno cusub oo heer sare ah oo CNC ah sannadkan ma ahan oo keliya inay si weyn u kordhiyeen awoodda wax-soo-saarkooda, laakiin sidoo kale waxay fureen habab cusub oo loogu talagalay naqshadeynta alaabada, iyo horumarka.
Mashiinka 'CNC milling' iyo mashiinka wareejinta ayaa dhameystiraya mashiinnada farshaxanka-farshaxanka ee horay loo adeegsaday kaas oo loo sameeyay huwadaha Harder & Steenbeck, halka mashiinka cusub ee wax lagu hagaajiyaa uu awood u siinayo dhammaystirka finanka ah in lagu dabaqo qaybaha ka dib markii la farsameeyay.
Laakiin unugga bixiya danaha ugu weyn ee isticmaalayaasha Harder & Steenbeck waa mashiinka cusub ee irbadda CNC. Awoodda mashiinkan ayaa macnaheedu yahay H&S inay fikrado cusub u keento qaabeynta iyo dhammeynta cirbadaha. Oo sidaas darteed xornimadan cusub, waxay bilaabeen inay baaraan sida ugu wanaagsan!
Hadafka koowaad, wuxuu ahaa waxa qof walba ka doonayo irbad - inuu noqdo mid xoog badan! Qalabka cusub wuxuu la shaqeyn karaa oo qaabayn karaa waxyaabo qalaad oo saafi ah, sidaa darteed cirbadaha cusub waxaa laga soo saaray shey ku dhawaad ​​1/3 ka adag yihiin sidii hore.
Ka dibna, nashqulka… Wax badan ayaa dhowaan laga sameeyay cirbadaha "double-taper". Runtii waa run in cirbadaha taper laba ay ka sarreeyaan cirbadaha hal taper. Si kastaba ha noqotee, kaliya inaad noqoto taayir laba laab ah dammaanad kama qaadi karto guusha. H&S waxay baratay in dhibicda midabkeedu "ka takhaluso" irbadda ay tahay barta ugu muhiimsan. Sharaxaad faahfaahsan, halkan waa meesha labada taper ay ku kulmaan.
H&S waxay sameysay daraasad ilaa sanadka 2018 dhererka taper, xaglaha iyo sida cirbadaha naqshadeynta cirbadaha udhaxeyso labada taper. Ka dib noocyo badan, iyo waqti badan oo ay la shaqeynayeen farshaxan yahannada, waxaa loo soo saaray sifeyn cusub oo loogu talagalay dhammaan cabirrada laga bilaabo 0.15mm illaa 0.6mm.
H&S sidoo kale waxay qaadatay fursadda si ay uga dhigto calaamadaha aqoonsiga cirbadaha ee dhamaadka gadaal in ay fududaato in la fahmo, sida aad ka arki karto sawirrada. Nozzles-ka ayaa sidoo kale wata isla qaab isku mid ah.
Jawaab celinta cirbadaha cusub waa wax kasta oo H&S ay higsaneysay - in si ka badan loo xakameeyo faahfaahinta, xariiqyada qurxinta iyo atomisation-ka guud ee wanaagsan oo loo maro kala-sooca kicinta. Iyagu sidoo kale waa u nugul yihiin inay noqdaan kuwo qallalan oo ay ugu wacan tahay maadada adag iyo qaabeynta dib loo eegay, waxay aad uga xoog badan yihiin qaababkii hore.